China Ladies etemeete mmiri na akọrọ na -agbanwe etemeete sponge akwa Onye na -emepụta ihe na onye na -ebubata ya Dongmei
Ojiji nke etemeete etemeete: ahịhịa ntụ ntụ na -atọ ụtọ: etemeete ntụ ntụ ahụ nwere s ...
Ladies etemeete mmiri na akọrọ na -agbanwe etemeete ogbo akwa
Dongshen ọkachamara etemeete sponge blender, mara mma pink drop shape, latex-free makeup sponge blender ka nke PU, enwere ike iji ya maka akọrọ na udu mmiri, etemeete ahụ siri ike ma nwee akpụkpọ ahụ, enweghị mgbakasị ahụ.
SP ỌGWU MAKPERE DONGSHEN: Sponge Blender mere site na ihe ncha dị ọcha iji belata nfụkasị, mmetụta nro, sponge mara mma nke ọma, dị mfe ịmata. Ogbo etemeete bụ nnukwu nhọrọ maka ndị ọkachamara na ndị mbido. Ọ dị mfe iji, dị ọcha. Nweta sponge iji bulie etemeete gị kwa ụbọchị!
Ọ dị nfe: ị gaghị abụ onye ọkaibe - chọpụta ka ọ dị mfe iji sponge mara mma nke eke gị. Nanị WERE, SQUEEZE na BOUNCE. Jiri mmiri sponụọ sponge mara mma gị, kpochapụ mmiri ọ bụla gabigara ókè, ma bulie ngwaahịa etemeete gị n'ihu ihu maka nsonaazụ na -enweghị ntụpọ.
Design Ọdịiche Pụrụ Iche: Jiri okpokoro etemeete etemeete mara mma gbara okirikiri maka ntọala ma ọ bụ ime ihiere, akụkụ dị mkpa iji banye ebe siri ike iru (gburugburu anya, ọnụ, na imi) na akụkụ dị larịị maka ịdebe gburugburu imi na anya. , ojiji dị iche iche na -enyere aka nweta mmecha na -enweghị ntụpọ.
● AKWỤKWỌ MA Ọ BỤ AKWỤKWỌ: Nzube Blender nwere ike ịza aza mgbe ọ dị mmiri mmiri, dabara maka ụdị ịchọ mma niile, ntọala, ude BB, ntụ ntụ, ihe mkpuchi mmiri, mmiri mmiri na ihe ndị ọzọ. Ojiji mmiri na mmiri na-ezere mkpofu ihe ịchọ mma. 8 agba dị iche iche na-agwakọta sponge etemeete, enwere ike itinye ọnụ na akụkụ oblique nke sponge etere anya iji tinye ihe ịchọ mma dị iche iche, enweghị ntụpọ maka mmiri mmiri, ude na ntụ.
ER Ọrụ afọ ojuju 100%: Ihe eji achọ mma etemeete etemeete bụ nhọrọ gị kacha mma .Ọ bụrụ na ịchọta nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ntụzịaka na blọgụ etemeete etemeete anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị, anyị ga -enye nkwado ọkachamara na ọrụ n'ime awa 24.
Lezienụ anya maka "Okwu Ndị Na -emekarị":
- Miri ogbo ahụ ma fesaa mmiri oke tupu itinye ntọala mmiri mmiri.
- Etinyerela ntọala na sponge ozugbo! Kama, tinye ntụpọ n'elu ihu gị wee jiri ogbo ahụ gwakọta.
- ETINYEkwa na ngagharị okirikiri. Kpatụ obere ma ọ bụ tinye ya n'ime ihu gị ka ọ rụchaa nke ọma.
- Dochie ọnwa 3 ọ bụla maka ibiaghachi kacha mma, zere mgbasa nke nje.
Nke gara aga: Ọkachamara aprịkọt nwere akụkụ atọ etemeete sponge blender
Osote: Eco-friendly elastic soft skin-friendly makeup sponge beauty blender
Ogbo Blender Mma
Mee elu ogbo
Ogbo etemeete n'ùkwù
Dongshen etemeete Ogbo N'ogbe Beveled Mkpa ...
Dongshen ọkachamara etemeete ogbo dobe udi ...
Professional mmiri na akọrọ ntọala agwakọta nke ...
Ngwa ọkachamara n'ụdị gourd Dongshen ...
Dongshen etemeete ogbo blender maka ntụ ntụ ude ...
Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete, etemeete ahịhịa setịpụrụ, Mee Ncha, Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, Nịm etemeete ahịhịa, Ịkpụ afụ ọnụ,